कसरी सुत्दा हाम्रो स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ ? जानी राखौ - Arghakhanchi Saptahik
Home Slider स्वास्थ्य कसरी सुत्दा हाम्रो स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ ? जानी राखौ
कसरी सुत्दा हाम्रो स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ ? जानी राखौ
देब्रो ढल्केर सुत्नेः यो पोजिसनले शिरलाई प्राकृतिक अवस्थामा राख्छ । घुर्नेका लागि पनि यो पोजिसनले खासै असर गर्दैन । यो पोजिसनमा सुत्दा शरिरमा एसिडको प्रवाह न्यून हुन्छ । गर्भवती हुँदा यो पोजिसनमा सुत्दा धेरै फाइदा हुन्छ । एकातर्फ कोल्टे परेर सुत्ने मानिस जहिले पनि देब्रे फर्केर सुत्नुपर्छ । यो पोजिसनमा सुत्दा पाचन प्रणालीलाई सहयोग गर्छ ।